Igbe Onyinye na Mkpuchi Ribbon
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe onyinye CB-110 nke gram 1200 gram, akwụkwọ art 157 gramatik maka akwụkwọ akwụkwọ. Styledị igbe ahụ jikọtara mkpuchi abụọ na igbe dị n'ime, mepee ma mechie ya na mpe mpe akwa, mgbe igbe mechiri, ị nwere ike ịme ụta. CMYK agba, na elu na-eme matt lamination, logo ọla ọcha na-akpụ akpụ na diecut ụdị udi. Mpekere nke igbe: 308mm * 172mm * 65mm N'okpuru tebụl, ị nwere ike ịhọrọ akụrụngwa, imecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ihe ： Ihe CB-110…
Igbe nkwakọ ngwaahịa etemeete
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe mpempe akwụkwọ ndozi nke CB-109 mee kaadiboodu isi 1300 gragram, akwụkwọ art 157grams maka ikpuchi. Akara mpempe CMYK na igbe ahụ, ma na-eme lamination na-acha uhie uhie.The logo of sample ka emere silviahot stamping.T igbe a mepere ma mechie ya. Enwere akwa ojii na-acha ajị anụ na igbe. Boxdị igbe: igbe mpempe / igbe akwụkwọ mpịakọta nke igbe: 255mm * 206mm * 30mm N'okpuru tebụl, ị nwere ike ịhọrọ ihe, ịmecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ihe ： CB -...
Igbe onyinye Kalinda
Nkọwa ngwaahịa: igbe igbe nke CB-108 bụ nke kaadiboodu ọcha dị 1300, akwụkwọ ọgụgụ 157grams maka ikpuchi. Otu agba ojii na-ebipụta na igbe ahụ, ma na-eme matt lamination.The logo nke sample na-eme stamping na-ekpo ọkụ, UV, mmalite niile na-acha uhie uhie na-ekpo ọkụ igbe a mepere ma mechie ya. Enwere igbe igbe 24 na ọnụ ọgụgụ dị na igbe dị na mpụga. Boxdị igbe: igbe mpempe / igbe akwụkwọ mpịakọta: 256mm * 256mm * 90mm N'okpuru okpokoro, ị nwere ike ịhọrọ akụrụngwa, imecha na ibi akwụkwọ f ...
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe ịchọ mma nke CB-106 mee kaadiboodu ọcha dị 1200, akwụkwọ ọgụgụ 157gram maka ikpuchi. Mpempe akwụkwọ CMYK na-ebi akwụkwọ akwụkwọ niile dị na ya, ma na-eme lamination na-acha uhie uhie.Igour logo nwere ike iji stamping dị ọkụ, UV, SILK ebi akwụkwọ, embossing / debossing. Igbe a mepere ma mechie ya. Boxdị igbe: igbe mpempe / igbe akwụkwọ mpịakọta: 190mm * 140mm * 45mm N'okpuru tebụl, ị nwere ike ịhọrọ akụrụngwa, imecha na ibipụta maka igbe nkwakọ ngwaahịa gị. Ikpehe ： CB-106 Mate…
Igbe egbugbere ọnụ Gloss
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe mpempe akwụkwọ mkpuchi igbe nke CB-107 nke kaadiboodu ọcha dị 1200, akwụkwọ ọgụgụ 157gram maka ikpuchi. Ejiri agba agba CMYK na mkpuchi na agba ojii na igbe dị n'ime, ma na-eme matt lamination.Your logo gị nwere ike iji stamping dị ọkụ, UV, mbipụta SILK, embossing / debossing. Igbe a mepere ma mechie ya, ọ na-emeghe na windo mkpuchi dị na mkpuchi. Enwere akwa plastiki pP ojii nwere ebe mkpuchi ojii maka icho mma. Dị igbe: igbe igbe / igbe Akwụkwọ mpịakọta: 240mm * 97mm * ...
Kaadị igbe mkpọchi kaadiboodu
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe a na-adọrọ adọrọ nke CB-105 1200 gram na-acha ọcha kaadi, akwụkwọ ọgụgụ 157gram maka ihe mkpuchi. N’etiti uwe aka nwere windo transperent. Agba uhie na-ebipụta na mpempe akwụkwọ niile dị na ala, na -eme ntinye akwụkwọ Matt, akara ngosi a na-eji oji na-ekpo ọkụ na-acha oji. Enwere igbe ihe ngosi 1 PET n'ime igbe iji dozie ngwaahịa gị nke ọma. Ihe mpe mpe akwa maka imepe igbe ahụ. Mpekere nke igbe: 254mm * 114 * 48mm N'okpuru okpokoro, ị nwere ike ịhọrọ ihe eji eme, ịmecha na ibipụta ...
Igbe nkwakọ ngwaahịa onyinye igbe
Nkọwa ngwaahịa: igbe igbe CB-104 a na-eji kaadiboodu ọcha dị 1200 gram, akwụkwọ eji acha odo odo maka mkpuchi. N'ime etiti uwe nwere windo na-enweghị atụ. Edere ya otu agba n’elu akwụkwọ nile nke pel, yana ime ala matt, ị nwere ike tinye UV na akara ya ma gbaa ya ọkụ. Maka akwụkwọ pearly, ọ na-ele anya karịa nke ọma. Enwere 1 PP plastic plate na gluu kaadi agba n’ime igbe ahụ iji dozie ngwaahịa gị nke ọma. ụfọdụ rịbọn picecs maka iji chọọ igbe ahụ. Dimensi ...
Igbe mpempe akwụkwọ onyinye onyinye Bow
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe mkpọchi CB-103 Bow greyboard 1200 gram, akwụkwọ pelyl maka ikpuchi ya na ike. Edere ya 4 agba na pealu, na elu ime matt lamination, ị nwere ike tinye UV gi n’elu akara, na-ekpo ọkụ na stamping. Maka akwụkwọ pearly, ọ na-ele anya karịa nke ọma. Enwere ọnya 1 nwere akwa na-egbu maramara na igbe ahụ iji dozie ngwaahịa gị nke ọma. ụfọdụ pịks rịbọn na ụta akara maka iji chọọ igbe ahụ mma. Akụkụ nke igbe: 235mm * 235mm * 100mm & nbs ...
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe mpempe akwụkwọ ime ụlọ a dị na CB-102 nke gram 1200 gragram, akwụkwọ pelyl maka ikpuchi. enwere windo puru iche na mkpuchi na mkpuchi. Edere ya agwa di na pink na mpempe pealu, na ebe a na-eme matt, i gha agbakwunye akara ocha na nke ocha. Maka akwụkwọ pearly, ọ na-ele anya karịa nke ọma. Enwere ọnya 1 nwere akwa na-egbu maramara na igbe ahụ iji dozie ngwaahịa gị nke ọma. Mpempe ụfụfụ ojii, rịbọn abụọ pịdọn maka dec ...
Igbe onyinye Kalinda maka Obere ntecha
Nkọwa ngwaahịa: A na-eji igbe akwa GB-101 mee ihe dị gram 1200 gram, akwụkwọ art art 157 gram maka iji kechie akwụkwọ. Styledị igbe a na - ejikọta igbe abụọ, mepere site na etiti igbe ma mechie ya, ọ bụrụ na emeghe, ị ga - ahụ na e nwere ụlọ abụọ nwere windo 10, ị nwere ike ịkwakọ ngwaahịa 10 dị iche iche n'ime ha maka otu, ọ dị ka kalenda maka igbe onyinye. A na-ebipụta ya otu PMS agba, na elu na-eme matt lamination, logo silver stamping na embossing. Mmetụta dị mma mgbe ị metụrụ m ...